Weerar Askar Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Dalka Yemen. – Calamada.com
Weerar Askar Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Dalka Yemen.
calamada August 30, 2018 1 min read
Wararka ka imaanaya dalka Yaman waxay ku waramayaan in gobolka Abyan oo dhaca koonfurta dalkaas uu ka dhacay howlgal militeri oo ay fuliyeen ciidamada Mujaahidiinta Alqaacidah Faraca Dhulka Jaziirada Carabta.
Weerarkan ayaa si gaar ah loola beegsaday Bar-kontarool ay ku sugnaayeen ciidamada Xizaamul Amni,iyadoo weerarkaas laga helayo faahfaahino dheeraad ah.
Qoraal kasoo baxay Mujaahidiinta Al-qaacidah ee Jaziirada Carabta ayeey ku xaqiijiyeen in weerarkaasi ay ku dileen Shan askari kuna dhaawaceen Saddex kale kuwaasi oo gabi ahaantooda ah maleeshiyaatka ay tababartay dowlada Cadowga ah ee Imaaraatka Carabta.
Ciidamada Mujaahidiinta ayaa sidoo kale dagaalkaasi ku gubay Gaari Gaashaaman,waxeyna Mujaahidiinta soo furteen Hub kala duwan.
Weerarkan wuxuu meesha ka saarayaa warar ay warbaahinta dhowr jeer ka sheegeen saraakiisha xukuumadda Yaman kaas oo ahaa in gobolka Abyan ay ka nadiifiyeen Mujaahidiinta, waxaana weli gobolka uu ku jiraa meelaha ay ku xooganyiin dagaalyahannada Al-Qaacida.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo.19-12-1439 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 19-12-1439 Hijri.